Dr. Maxamuud Maxamed Culusow
Waxaa yididiilo cusub ah in dowladda Mareykanka, gaar ahaan Wasaaradda Arrimaha dibedda ay soo saartay bayaan cad (war cad) ee ku saabsan qabashada doorashooyin furan, xor iyo xalaal ah ee ka dhaca qaaradda Afrika hadda kaddib.Bayaanka (Warka) cad wuxuu hoosta ka xariiqaya in qabashada doorashada furan, xorta iyo xalaasha ah ay muhiim u tahay dalalka Afrika iyo difaacayaasha nidaamka dimoqradiga ee Adduunka. Sidaa awgeed, doorashada ka dhaceysa Soomaaliya waa doorasho ay wada leeyihiin (shinsanayaan) taagerayaasha nidaamka dimoqradiga ee Adduunka.
Isbaheysiga Madaxweyne Farmajo wuxuu ku guuldareystay diyaarinta doorasho HQHC ee ku imaan laheyd dadaal afar sano ee xagga siyaasadda, dib u heshiisinta, dhammeystirka dastuurka, dhammeystirka dowladnimada xagga midnimada iyo fidinta maamulka siyaasadda, nabadgelyada, garsoorka, dhaqaalaha, adeegga bulshada. Doorasho HQHC waxay ka soo unkami laheyd dastuur dhammeystiran, sharciga Xisbiyada, iyo sharciga doorashada oo dhaqangalkooda aheyd inuu bilaabmo 2018-2019. Nasiib darro, ma dhicin, waxaana lagama maarmaan noqday in Soomaaliya ku nagaato berrinkii ay joogtay 2016 ilaa mar kale sahanka doorasho HQHC laga ambaqaadayo. Hannaanka doorasho 2020 ee lagu heshiiyay waa mid ka tarjumaya marxaladda shacabka Soomaaliyeed hadda marayo. Waa jiraan fikrado isburrinaya ee ku saabsan wax qaybsiga iyo sedbursi, xalkoodana u baahan yahay gogol iyo waqti gaar ah.
Ayadoo laga shidaal qaadanayo doorashhoyinkii dalka ka dhacay laga bilaabo bisha Maarso 2017 ilaa maanta Oktoobar 2020, waayo aragnimada hortaal shacabka Soomaaliya waxay tahay in Isbaheysiga Madaxweyne Farmajo ka go’aan tahay boobka iyo musuqmaasuqa doorashada 2020/2021. Sidaa awgeed, waxaa lagama maarmaan in laga qayb galo halganka qabashada doorasho furan, xor iyo xalaal ah oo waafaqsan hannaanka ku meel gaarka ah ee lagu heshiiyay.
Khatarka koowaad ee halista ku ah doorashada Soomaaliya waa lacagaha shisheeye iyo adeegsiga sharcidarrada ah ee awoodda dowladda ee Isbaheysiga Madaxweyne Farmajo wadaan, taaso kallifeysa in Isbaheysiga mucaaradka ay raadsadaan taageero shisheeye iyo abaabulka miliishiyad gaar ah, iyo inay mar kasta u dacwoodaan difaacayaasha nidaamka dimoqradiga caalamiga ah (beesha caalamka).Xaaladda siyaasadda iyo nabadgelyada Soomaaliya waxay mareysa heer halis ah, shakhsiyaadka hadda horboodayana waxay ku marqaansan yihiin xadgudubyada ay ku dhaqmayaan, kuna faanayaan.Sannadka 2020/2021 wuxuu Soomaaliya u yahay dhimo ama dhaqaaq. Waxaan ilaahey ka baryaya in Soomaaliya ka badbaadiyo haadaanta ay qarka ka taagan tahay.
WQ: Dr. Maxamuud Maxamed Culusow